Sida gabadha biyaha looga keeno Women's consultation
» Sida gabadha biyaha looga keeno Women's consultation
Afti la sameeyay ayaa lagu sheegay in 70% haweenka aysan helin macanka gariirka galmada taasina ay sabab u tahay iyadoo ninka uusan sameyn gogol xaar bashaal ah oo ku filan gabarta si dareemaheda u kacaan ama in uusan aqoon goobaha sida gaarka ah gabarta uga kacsato .
Anonymous4/26/2011Dumarka Soomaalida gudniin fircooni aad u xun ayaaba lagu sameeyaaye xaggay raaxada aad sheegayso ka keenayaan? Horta dumarka haloo daayo sidii Eebe u abuuray markaas ayay galmada sidii Eebe ugu talagalay ugu raaxaysane.FilsanReplyDeleteRepliesAnonymous7/23/2015ragii soomaaliyeed waxay u dhinteen niika haweenka FGM lagu guday waa sidii alwaax lagu raaxeeysanayo ee hooyooyinka iyo aabayaahsa gabdhaha ha ka daayeen FGM diinta ma ogo, waana lagu wada rafaadsanyahay gabdhahana dhib xun ayaa ku reebaa FGM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DeleteReplyRnsh.dr4/26/2011Filsaney walaal rag iyo dumarba ninba nin haduu farta ku fiiqo oo qofwaliba isaga isla saxsanaado sow howsha noqon meyso mindi mindi ku taag. Aniga waxan aad isu weydiiyay wax yaabo badan.dad badan ayaan suaalo wey diiyay qaarbaa iyaga ila soo doontey iney wax iiga sheegaan.qofba wuxuu kahadlay waxa asaga dhibey.1.mid baa waxey tiri aniga waxaan wax dareemaa bishi halmar markaa hadaan waayana waan iska aamusaa ninkeeda ayaa ahaa nin safar badan.2.midi labaad waxey tiri imaba baahi tiro waa maruu maqanyahay iyo maruu hurdo walibo gabadhan wey oyday markey ii sheegeysay baahida ku gaagaxsan.3. Midan waxey tiri markan iskhilaafnaba sariirta yuu igeeyaa wax kastoo aan qabeyna ku ilaawaa raaxada nadhexmarta.4.midan waxey tiri siduu usoo socdo yuu dakarkiisa la aadaa farjigeyga raaxo aan arko daaye xanuun baan ka qaadaa ee waxaa kafiicnaa ninkeygi hore oo markuu meel walbo iga gacan mariyo oo aan kax taaganahay ii galmoon jirey.4.midan iyana waxey tiri waxaan guursaday laba nin waxaan xor unoqon waayey sidan jeclahay inaan sheegto.kadib waxan helay bey tiri nin wax fahamsan wareysta weydiiya sida ay jeceshahay una sheegay hadey wax sheegan weydo in aysan heleyn raaxo iyo farxad waxey tiri waxaan helay baadideydii waxaa taam noqotay nolosheydii.Aniga waxaan qabaa marka hore dumarka ha aaminaan iney baahi rabaaniya jirto sababtu ugu weyne guurka kadanbeysaa taa tahay. dumarka somaliyeed xanuunka aan daawada laheyne hayaa waa qarsashada waxa ay dareemayaan.Dawadeena waa inaan qiranaa waxa aan ubaahannahay taas ayaa keeni karta isfahan.marka horana guurso qofaad jeceshahay.Guurka hortiina hala iska ilaaliyo meela galgalka waayo waxaa laga yaa baa inaad kuqanci weydo taad guursato.dhibaatooyinka qaar umadahaba weynala qabaan.Ragi hadey raaxo maleh dumarkeeni lasoo istaagaan. Dumarkiina cadaan iyo ajnabi guursi aadeen qiilna kadhigtaan rageena maya garanayaan raaxada cusub. Maxaa inoo xala?ReplyDeleteRepliesAnonymous11/09/2016Sacab, sacab, sacab! Weliba, waa aan kuula kacay, walaal! Wallaahi, si rumaad baa aan ugu khushuucay intaa aad cabasho nala soo wadaagtay, iyo ka dib halkaa qodob ee aad xalka iskugu soo xoorisay. Nacam, inkasta oo aanan weli guursan, haddana sida aan dhaqanka ka fahmayo, ''dumarkeenna Soomaaliyeed xanuunka aan dewada lahayn ee hayaa waa 'WAX- QARSI' .'' Allaha, walaal, dumarkeenna intii qormadadaadan fikirku ku qancayo aragta kuwii manaafacaadsada (ka faa'iidaysta) ka dhigo. Aammiin.Ku mahadsanid, walaal, in badan taladaadaa wax- ku- oolka ah.DeleteReplyDood wadaag4/28/2011Asc dhammaan@Runsheeg dumar,Waa jawaab xiiso badan. Waxay na tuseysaa haddaan rag nahay sirta qarsoon ee dumarkeennu ay sheegi la'yihiin. Waxaan la yaabanahay sababta ay gabadha xaaska ahi ninkeeda ugu sheegan la'dahay waxay tabanayso, ayna ugu sheegeyso qof kaloo dumar ah. Maxay uga qaban kartaa oo uusan ninkeedu uga qaban karin. Tolow ma waxay rabtaa iney qoftan ay u sheegatay sirteeda hoose u gudbiso ninkeeda waxay ka rabto. Waan ogahay iney dumarku sirta isku qarsadaan, laakiin waa cajiib.Ragga waxaan kula talin lahaa iney dumarkooda ka hadashiiyaan oo ay ka keenaan iney u sheegto danteeda iyo waxay ka rabto. Dumarkeennu way xishood badan yihiin, waxaana fiican in ninku ka saaro oo uu gaadhsiiyo heer aysan isaga waxba kala gabban ama ka qarsan. Taasna waxaa lagu keeni karaa in la tuso kalsooni iyo inaadan adigu kala gabban wax kasta ee aad weydiiso sida iyo goorta iyo qaabka ay jeceshahay.Dumarkana waxaan kula talin lahaa ineysan is xidh xidhin oo ay ninkeeda kala xishoon baahideeda illeen qof aan isaga ahayn wax ugama qaban karee. Intaad gabadha saaxiibaddaa ah u sheegeysid baahidaada u sheeg ninkaaga. Xataa haddaadan afka ka sheegi karin oo ay kugu adag tahay ficil ku tusi.SalaamReplyDeleteRnsh.dr4/28/2011WCS. Dood wadaag waayadan kuma arag.Aniga waxaan lasaaxiibey gabdho wadaado ah kuwo yo yo ah iyo kuwo somalidí hora ah qolo walbaana waxbaan ka faa iidey.hadaan hada isku dayo inaan sharaxo qodobada ugu muhiimsan een ka faa iidey wey ila tagin howlkalaana igu furane waa inoo markale.wsc.ReplyDeleteDood wadaag4/28/2011Asc dhammaan@Runsheeg dumar Walaal aad ayaad u mahadsan tahay. Aad ayay u yar tahay maalin aanan soo booqan bloggan, waxaanse wax qoraa markaan arko sheeko i soo jiidata ama aan aqoon u leeyahay. Horaan kaaga codsadey inaad nooga faaiideyso khibraddaada. Waxaanan kuu soo jeediyey inaad isku daydo inaad buug ka qorto. Isfaham waaga naga dhexeeya waxaa u sabab ah intiisa badan wax qarsigiinna aad qarsaneysaan waxaad naga rabtaan. waana xishoodka badan ee Ilaahay idinku beerey, waana dabiici. Marka maadaama aad dumar badan la sheekeysatey arrimo badan oo aysan raggooda u sheegan karinna ay kuu sheegeen, waxaa ila fiican inaad soo gudbiso si raggu uga faaiideystaan.SalaamReplyDeleteRnsh.dr4/28/2011Asc guud ahaan @Dood wadaag buug aan qoree yaa igala qeyb qaadanaaya tifaftirid talo bixan naxwe sixid hada kohor waxad igu tiri anaa kugu garabsiinaya bulshada aan ufaa iideeyo maxumee inkastoo aqoonteyda yartahay xageen kaala xiriiri karaa. Aniga emailkeyga saxdaa magaceyga saxda ah ayaa kuqoran meeshaan kuma daabici karo waa oodaa rogan ileyn meel umada udhaxeyso weeyaane.ReplyDeleteRepliesRoda Jama1/02/2016Asc walal waa wax lagu farxo maasha allah anigaa kugu caawinaya intii awoodayda ah DeleteRoda Jama1/02/2016Asc walal waa wax lagu farxo maasha allah anigaa kugu caawinaya intii awoodayda ah DeleteReplyDood Wadaag4/29/2011Asc@Runsheeg dumarWalaal igala soo xidhiidh emailkandodwadaag@yahoo.comwaa "oodaa rogan" sidaad sheegtey oo wax badan ma sii qori karo ee emailkaas igala soo xidhiidh.Salaam,DoodwadaagReplyDeleteAnonymous11/16/2014soomaalidu waxay aaminsantahay guurku u jeedadiisu inay tahay hala is fuulo kaliyalaakiin macno kale maleh hadii ay sidaas tahay waydinka hadh iyo habeen is fuushanemaxaa qoyskiina burburiya. Maxaa is haysan waydeen waydinka website dada ku soo bandhigaya hala is fuulo e. Arintani waa sir sidii alle ka dhigay ku laabta diinta ku daliishanaya iyo kuwa caamada ah.ReplyDeleteSahro luul5/27/2015aniga biyaha dhowr jeeb bay iga so baxan gariir badanban darema ma jirro badaReplyDeleteRepliesYahya Musalim5/27/2015Naag waxa tahay caafimaad qabta e alx dheh Deletesharmarke8/10/2016Abaayo aniga ayaa ubahan naaif iyo bad bad an DeleteReplyRG5/27/2015naagaha kacsiga badan gariirkooda ma istaago ilaa ninkooda uu galmada ka dhameeyoReplyDeleteAdd commentLoad more...